Iindlela ezi-6 ezilula zokuPhucula umxholo wakho weNtengiso | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 31, 2015 Douglas Karr
Zisekho iinkampani phaya ezithi zisokole nesicwangciso kunye nezixhobo eziyimfuneko ukuvelisa umxholo ofanelekileyo. Kwaye uninzi lwezo nkampani alukuqondi ukubuya kutyalo-mali olunokuthi luziswe sisicwangciso sokuthengisa kuba banokuyeka ngokukhawuleza okanye abaqondi ngokupheleleyo ukuba mababhale ntoni, babhale njani, kwaye babhale phi.
Iinkcukacha-manani zingqina ukuba ukuthengisa umxholo kudale umahluko omkhulu kwinkqubela phambili nophuhliso lwamashishini kolu shishino. Ukuthengisa umxholo kunokutshintsha indlela abathengi abajonga ngayo amashishini, kunye nokukhanyisa kobu buchule senze i-infographic enesihloko Unokuba yingcali njani kwiNtengiso yeKhontenti.
Le infographic evela IDot Com Infoway -IArhente yokuThengisa ngeDijithali ichaza izibonelelo zenkqubo yokuthengisa umxholo kunye neendlela ezilula zokuphucula isicwangciso sakho. Ndiqaphele indawo engenanto kwi Ukukhetha iSihloko Uluhlu lokutshekisha-Ngendongeze uphando lwamagama aphambili kushishino lwakho lokuchonga izihloko, ukuphonononga izihloko ezithandwayo kwiindawo ezikhuphisanayo, ukongeza kwiindaba zecandelo lokushicilela ezongeza ixabiso kubaphulaphuli bakho. Njengokuba ndisenza ngokwabelana nge-infographic-awusoloko usebenza ukusuka ekuqaleni-ngamanye amaxesha umntu opapasha umxholo oxabisekileyo kubaphulaphuli bakho onokwabelana nawo.
Icandelo eliphambili yile Izinto ezi-6 zokuzigcina engqondweni ngelixa usenza kunye noMxholo wokuThengisa. Ndiyathanda ukuba bathethe ngentengiso kuba iinkampani ezininzi zibhala umxholo kunye nolindelo lokuba abantu baya kuthontelana ukuya kuwo… kodwa kufuna umgudu ongaphezulu koko! Nazi iindlela ezi-6 ezilula:
Sebenzisa iintloko ezibamba amehlo ukuze ubambe ingqalelo.
Abantu zizilwanyana ezibonakalayo.
Yenza umxholo omkhulu.
Fumana kwaye ujolise kubaphulaphuli abalungileyo.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaumxholo wentengisoamanyathelo okuthengisa umxholoingcali